ဒီည စီရော်နယ်ဒို ဖရီးကစ်ကနေ ဂိုးသွင်းနိုင်မလား? မက်ဆီကတော့ စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ |
ဒီည စီရော်နယ်ဒို ဖရီးကစ်ကနေ ဂိုးသွင်းနိုင်မလား? မက်ဆီကတော့ စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ
June 15, 2021 Wai Yan Articles 0
ချီလီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားအတွက် အလွတ်တည်ကန်ဘောကတဆင့် တစ်ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ
စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဖရီးကစ်သွင်းဂိုး အရေအတွက်ကို တစ်ဂိုးအသာနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ချီလီကွင်ဖက်အခြမ်း ၃၅ ကိုက် အကွာလောက်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အလွတ်တည်ကန်ဘောကို
မက်ဆီက ချီလီဂိုးသမားရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်ကို လှလှပပကန်သွင်းယူပြီး ရယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာ မက်ဆီတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဂိုးစီသရေနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ကိုပါအမေရိကအုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ တစ်မှတ်စီခွဲယူသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒီသွင်းဂိုးဟာ မက်ဆီအတွက်တော့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နိုင်ဂျီရီးယားနဲ့ ကစားပြီးနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ ပယ်နယ်တီကနေ မဟုတ်ဘဲ
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၆ က ကစားခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာနဲ့ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားအတွက် ဖရီးကစ်ကနေ သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးနောက်ပိုင်းမှာ
ပထမဆုံးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ စီရော်နယ်ဒိုက ဖရီးကစ်သွင်းဂိုး ၃၃ ဂိုးရရှိထားချိန်မှာတော့ မက်ဆီဟာ ၇ ဂိုးတည်းသာ ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၉ နှစ်အကြာမှာတော့ စီရော်နယ်ဒိုက ၅၆ ဂိုးတည်းသာ ရရှိထားပြီး မက်ဆီက ၅၇ ဂိုးနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီအနေနဲ့ ဂိုးပေါင်း ၂၆ ဂိုးအထိ ကွာဟနေတာကို ၉ နှစ်အတွင်းမှာ အမီလိုက်ကာ ကျော်ဖြတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး စီရော်နယ်ဒိုဟာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်း ဖရီးကစ်သွင်းတာကနေ ရတဲ့ဂိုးအရေအတွက်က လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရနေခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦးအဖြစ် တစ်ခေတ်တည်းမှာ တချိန်တည်း ရပ်တည်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ
အသေးစား အချက်အလက်တွေကအစ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဖက်ပရိသတ်အတွက်လည်း ကိုယ်အားပေးတဲ့ ကစားသမားက အသာရတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးတော့ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ
ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေက နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ပိုပြီး ပြင်းထန်နေဦးမှာပါ။
ဒီညမှာ ကစားမယ့် ဟန်ဂေရီနဲ့ ယူရိုအုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ စီရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ ဖရီးကစ်ကနေ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
မက်ဆီသွင်းထားတဲ့ ဖရီးကစ် ဂိုးအရေအတွက်နဲ့ ပြန်တူသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ ဖရီးကစ်သွင်းဂိုး အများဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ ကစားသမားကတော့ ဂျူနင်ဟိုး ဖြစ်ပြီး သွင်းယူတဲ့ဂိုး (77)ဂိုးနဲ့ စံချိန်တင်ထားပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမား မာရာဒိုနာက သွင်းဂိုး (၆၂) ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့စံချိန်ကိုတော့ မက်ဆီက သိပ်မကြာခင်မှာ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီည စီေရာ္နယ္ဒို ဖရီးကစ္ဂိုးရရင္ မက္ဆီနဲ႔ ဂိုးအေရအတြက္ ျပန္တူသြားမယ္
ခ်ီလီနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲမွာ အာဂ်င္တီးနားအတြက္ အလြတ္တည္ကန္ေဘာကတဆင့္ တစ္ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ မက္ဆီဟာ စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ့ ဖရီးကစ္သြင္းဂိုး အေရအတြက္ကို
တစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားနိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီလီကြင္ဖက္အျခမ္း ၃၅ ကိုက္ အကြာေလာက္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ အလြတ္တည္ကန္ေဘာကို မက္ဆီက ခ်ီလီဂိုးသမားရဲ့ ဘယ္ဘက္ေထာင့္ကို လွလွပပကန္သြင္းယူၿပီး ရယူခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြဲအျပီးမွာ မက္ဆီတစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဂိုးစီသေရနဲ႔ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ကိုပါအေမရိကအုပ္စုအဖြင့္ပြဲမွာ တစ္မွတ္စီခြဲယူသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီသြင္းဂိုးဟာ မက္ဆီအတြက္ေတာ့ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားမွာ နိုင္ဂ်ီရီးယားနဲ႔ ကစားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြမွာ ပယ္နယ္တီကေန မဟုတ္ဘဲ ပထမဆုံးသြင္းဂိုးလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၆ က ကစားခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာနဲ႔ပြဲမွာ အာဂ်င္တီးနားအတြက္ ဖရီးကစ္ကေန သြင္းခဲ႔တဲ႔ဂိုးေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဆုံးသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုက ဖရီးကစ္သြင္းဂိုး ၃၃ ဂိုးရရွိထားခ်ိန္မွာေတာ့မက္ဆီဟာ ၇ ဂိုးတည္းသာ ရရွိထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၉ ႏွစ္္အၾကာမွာေတာ့ စီေရာ္နယ္ဒိုက ၅၆ ဂိုးတည္းသာ ရရွိထားၿပီး မက္ဆီက ၅၇ ဂိုးနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဆီအေနနဲ႔ ဂိုးေပါင္း ၂၆ ဂိုးအထိ ကြာဟေနတာကို ၉ ႏွစ္အတြင္းမွာ အမီလိုက္ကာ ေက်ာ္ျဖတ္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စီေရာ္နယ္ဒိုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္အတြင္း ဖရီးကစ္သြင္းတာကေန ရတဲ႔ဂိုးအေရအတြက္က လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ ရေနခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးကစားသမားႏွစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ေခတ္တည္းမွာ တခ်ိန္တည္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေသးစား အခ်က္အလက္ေတြကအစ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ဖက္ပရိသတ္အတြက္လည္း ကိုယ္အားေပးတဲ့ ကစားသမားက အသာရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြက ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ပိုျပီး ျပင္းထန္ေနဦးမွာပါ။ ဒီညမွာ ကစားမယ္႔ ဟန္ေဂရီနဲ႔ ယူရိုအုပ္စုအဖြင္႔ပြဲမွာ စီေရာ္နယ္ဒိုအေနနဲ႔ ဖရီးကစ္ကေန ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ မက္ဆီသြင္းထားတဲ႔ ဖရီးကစ္ ဂိုးအေရအတြက္နဲ႔ ျပန္တူသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ဖရီးကစ္သြင္းဂိုး အမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ကစားသမားကေတာ့ ဂ်ဴနင္ဟိုး ျဖစ္ၿပီး သြင္းယူတဲ့ဂိုး (77)ဂိုးနဲ႕ စံခ်ိန္တင္ထားပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနားရဲ႕ ဂႏၱဝင္ကစားသမား မာရာဒိုနာက သြင္းဂိုး (၆၂) ဂိုးသြင္းယူထားတဲ့စံခ်ိန္ကိုေတာ့ မက္ဆီက သိပ္မၾကာခင္မွာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။
တီမိုဝါနာကို ရီးရဲလ်ဆီ အန်ဆယ်လော့တီ ခေါ်ဆောင်နိုင်မှာလား?
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေနဲ့အတူ ဟန်ဂေရီကို ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ